Intex Archives - Technology Khabar
इन्टेक्स क्यू ७ एन् प्रो बैंककबाट सार्वजनिक, बजारमा रू८ हजार भन्दा कममा पाइने
२४ पुष २०७३, आईतवार
काठमाडौं, २४ पुस । इन्टेक्सले नेपाली बजारमा नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बैंककको राजधानी थाइल्याण्डमा यहि जनवरी ५ मा इन्टेक्स क्यू ७ एन् प्रो (Intex Q 7n Pro) […]
काठमाडौं, १९ पुस । भारतीय मोबाइल कम्पनी इन्टेक्सका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक सीजी इम्पेक्स् प्रालिले देशभरका उत्कृष्ट ५० बिक्रेता तथा कर्मचारीलाई थाइल्याण्ड पठाएको छ । इन्टेक्स मोबाईल कम्पनीका मोबाईलको स्कीमअनुसारको […]
इन्टेक्सको एक्वा प्ले र एक्वा एयर बजारमा, एक्वा एयर किन्दा ८जीबीको मेमोरी निशुल्क
काठमाडौं, ४ फागुन । इन्टेक्स मोबाइलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सि.जी./इ.ओ. एल ले नयाँ मोडल एक्वा एयर फ्याब्लेट (Aqua Air Fablet) तथा एक्वा प्ले (Aqua Play) बजारमा ल्याएको छ । […]
इन्टेक्सको लो बजेट फोन ‘क्लाउड जेस्ट’, ललीपप ५.१ भर्सनमा आधारित
९ मंसिर २०७२, बुधबार
काठमाडौं, ८ मंसिर । इन्टेक्सले आफ्नो लो बजेट फोनहरु बजारमा पछिल्ला दिनहरुमा निरन्तर सार्वजनिक गरिरहेको छ । कम्पनीले बजेट फोनको क्लाउड सिरिजको नयाँ स्मार्टफोन क्लाउड जेस्ट (Cloud Zest) सार्वजनिक गरेको […]
इन्टेक्सको सस्तो थ्रीजी फोन, इन्टेक्स एक्वा प्लेमा ८ जीबीको स्टोरेज
काठमाडौं, १६ कात्तिक । इन्टेक्सले आफ्नो बजेट सिरिजको नयाँ स्मार्टफोन एक्वा प्ले सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनिले यो स्मार्टफोन आफ्नो वेबसाइटमा लिस्ट गरेको छ । यो बजेट स्मार्टफोन निकै कम […]
इन्टेक्सको ४३ इन्च डिस्प्लेसहितको नयाँ टेलिभिजन
६ आश्विन २०७२, बुधबार
काठमाडौं, ६ असोज । इन्टेक्सले आफ्नो नयाँ ४३ इन्चको एलईडी टेलिभिजन भारतीय बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । इन्टेक्स एलईडी ४३०० (Intex LED-4300) नामको यो टेलिभिजनको मूल्य ३२ हजार भारु तोकिएको […]
इन्टेक्सको ‘एक्वा सेन्स ५.०’ नेपाली बजारमा, थाइल्याण्डबाट नयाँ फोन भित्रिएको घोषणा
१९ भाद्र २०७२, शनिबार
काठमाडौं, १९ भदौ । नेपालका लागि इन्टेक्स स्मार्टफोनको आधिकारीक आयातकर्ता तथा बितरक ईओएल प्रालिले इन्टेक्स एक्वा सेन्स ५.० (Intex Aqua Sense 5.0) स्मार्टफोन नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । ईओएल प्रालिले […]
इन्टेक्सको फोरजी स्मार्टफोन एक्वा टर्बो
काठमाडौं, १४ भदौ । भारतीय स्मार्टफोन मेकर कम्पनी इन्टेक्सले आफ्नो फोरजी सपोर्ट स्मार्टफोन रेन्जमा नयाँ हेडसेट एक्वा टर्बो फोरजी लन्च गरेको छ । इन्टेक्सको यो फोन रिटेल तथा अनलाईन स्टोरमा […]
इन्टेक्सको बजेट फोन एक्वा क्लाउड
२७ श्रावण २०७२, बुधबार
काठमाडौं, २७ साउन । भारतीय स्मार्टफोन मेकर कम्पनी इन्टेक्सले आफ्नो नयाँ बजेट स्मार्टफोन इन्टेक्स एक्वा क्लाउड सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बजेट फोनको रुपमा ल्याएको यो स्मार्टफोन शपक्लूज वेबसाइटमा खरिद […]
इन्टेक्सको नयाँ फोन एक्वा ट्रेण्ड फोरजी
काठमाडौं, २० साउन । इन्टेक्स कम्पनीले एक्वा सिरिजको नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले नयाँ एक्वा ट्रेंण्ड फोरजी स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको हो । दुई सिम प्रयोग गर्न सकिने यो […]
इन्टेक्सले बजेट फोन एक्वा वाई टू पावर ल्यायो
६ श्रावण २०७२, बुधबार
काठमाडौं, ६ साउन । भारतीय स्मार्टफोन कम्पनी इन्टेक्सले एक्वा सिरिजको नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले एन्टेक्स एक्वा वाई टू पावर स्मार्टफोन लन्च गरेको हो । इन्टेक्सको यो स्मार्टफोनमा […]
इन्टेक्सको पहिलो स्मार्टवाच ‘आईरिष्ट’, थ्रीजी फोनकल गर्न र एसएमएस हेर्न सकिने
३० असार २०७२, बुधबार
काठमाडौं, ३० असार । भारतीय मोबाइल फोन निर्माता कम्पनी इन्टेक्स टेक्नोलोजीले एन्ड्रोयडमामा आधारित स्मार्टवाच सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले पहिलो पटक स्मार्टवाच बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । इन्टेक्सले पहिलो पटक […]
काठमाडौं, १३ असार । भारतीय कम्पनी इन्टेक्सले एक्वा सीरीजको नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले बजेट स्मार्टफोनको रुपमा एक्सट्रीम २ लन्च गरेको हो । इन्टेक्सको यो फोन अनलाईन इकर्मश […]
मोजिल्लाको स्मार्टफोन २४ सय रुपैंयामा नै !
३१ जेष्ठ २०७२, आईतवार
काठमाडौं, ३१ जेठ । के तपाईँ २४ सय रुपैंयामा नै स्मार्टफोन किन्न पाईन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिलेको अवस्थामा कुनैपनि ब्राण्डेड स्मार्टफोन करिब २४ सय रुपैंयामा किन्न पाईँदैन् । […]
काठमाडौं, १८ जेठ । इन्टेक्सले आफ्नो नयाँ बजेट स्मार्टफोन भारतमा लन्च गरेको छ । कम्पनीले क्लाउड सीरीजलाई अगाडि बढाउन क्लाउड पावरप्लस (Cloud Power Plus) स्मार्टफोन भारतीय बजारमा सार्वजनिक गरेको हो […]
इन्टेक्सले निशुल्क कल गर्ने सुविधा सहितको स्मार्टफोन ल्याउने
१० जेष्ठ २०७२, आईतवार
काठमाडौं, १० जेठ । भारतीय स्मार्टफोन कम्पनी इन्टेक्सले जुलाईमा दुईवटा स्मार्टफोन लन्च गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले ल्याउन लागेको स्मार्टफोनहरुमा निशुल्क कल गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनेछ । इन्टेक्सले सिंगापुरको […]
२६ चैत्र २०७१, बिहीबार
काठमाडौं, २६ चैत । नयाँ वर्षको अवसर पारेर पाको, न्यूरोड क्षेत्रमा मोबाइल कार्निभल यहि चैत २८ गतेदेखि आयोजना हुनेभएको छ । आज कार्निभलको बारेमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाको यूथ क्लबले मोबाइल […]
इन्टेक्सको अक्वा एक्स्ट्रीम भी भारतमा सार्वजनिक, १६ जीबीको इन्टरनल स्टोरेज
१० चैत्र २०७१, मंगलवार
काठमाडौं, १० चैत । इन्टेक्स कम्पनीले अक्वा एक्स्ट्रीम स्मार्टफोनको नयाँ भेरिएन्ट अक्वा एक्स्ट्रीम भी भारतीय बजारमा लन्च गरेको छ । कम्पनीले ल्याएको नयाँ स्मार्टफोन अक्वा एक्स्ट्रीमको बजार मूल्य भन्दा कम […]
रिमोट कन्ट्रोल भएको इन्टेक्सको स्मार्टफोन
१० फाल्गुन २०७१, आईतवार
काठमाडौं, १० फागुन । इन्टेक्स मोबाइल्सले नयँ डुअल कोर स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा यूनिभर्सल रिमोट कन्ट्रोल रहेको छ । यो स्मार्टफोनबाट प्रयोगकर्ताले टिभी, एसी, सेट अप वक्स लगायतका उपकरणहरु […]
सुविसु क्यान इन्फोटेक २०१५ शुरु, यस्ता छन् मोबाइल ब्राण्डका स्टलहरु (तस्विर सहित)
काठमाडौं, १५ माघ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको क्यान इन्फोटेकको २१ औं संस्करण बुधवारदेखि शुरु भएको छ । इन्फोटेकको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान […]
इन्टेक्सको दुईवटा बजेट स्मार्टफोन सार्वजनिक
काठमाडौं, ८ माघ । भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी इन्टेक्सले दुईवटा नयाँ बजेट फोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले भारतीय बजारमार्फत विश्व बजारमा अक्वा वाई३ (Intex Aqua Y3) तथा इन्टेक्स अक्वा […]
काठमाडौं, १७ मंसिर । स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याट्री ब्याकअपको समस्यालाई समाधान गर्ने उदेश्यका साथ इन्टेक्सले नयाँ स्मार्टफोन लन्च गरेको छ । भारतीय स्मार्टफोन निर्माता इन्टेक्सले ४००० एमएएच क्षमताको […]
एसियाकै सस्तो स्मार्टफोन इन्टेक्सले ल्याउने
१ भाद्र २०७१, आईतवार
काठमाडौं, १ भदौ । भारतीय मोबाइल कम्पनी इन्टेक्स टेक्नोलाजीजले चाडै नै एसियकै सस्तो स्मार्टफोन लन्च गर्ने भएको छ । जसको मूल्य भारतिय रुपैया २००० रहने कम्पनिले जनाएको छ । इन्टेक्सका वरिष्ठ […]